Ilaalinta Sirta Q2aad Farhan Mohamed Sultan (Rakad)
Wednesday July 11, 2018 - 11:51:36 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Ilaalinta Sirta Q2aad Farhan Mohamed Sultan (Rakad) Ilaalinta Sirta
Bal ila akhri dhacdadan yar , Waxay ahayd shaqaale in badan shaqodoon ahaa ka dibna waxay shaqo ka heshay shirkad ka mida shirkadaha dalka, sharciyaddii iyo heshiisyaddii lala galay waxa ka mid ahaa ilaalinta sirtashirkadda,se wayka siibbatay waxaannay si kalsooni leh ula wadaagi jirtay shirkadii tartanku ka dhexeeyay , maalinkasta waxay la wadaagtaa shirarka la gallo iyo hadafyadda la dajiyo,cidda ay sirta la wadaagaysaa waa shirkad kale oo tartan adag kula jirta shirkadda ay ka shaqeyso se shirkaddani waxay si joogtaa uga heshay sir iyo qorshayaalaannay waligeed hesheen, waxay si joogtaa oo saaxiibtnimo leh u warraysataa inantan shaqaalaha ka ah shirkadda kaletaas oo aanney dareensiin in sheekadda iyo warreysiga lala wadaagayaa ay sir u tahay shirkadda, markasta oo jaanis iyo kullan lala yeesho waxa laga warraystaa heerka shirkadda iyo waxa ay qorsheynayso, maalintii ugu qiimaha badnayd waxay fashilisay sirtii ugu fiicnayd ee shaqada lagaga joojiyay taas oo ahayd in ay sheegtay adeegyocusub iyo siro muhiim u ahaa shirkadda oo ay shirkadeedu ku hawlan tahay ka dibna waxa lagu war hellay shirkaddii oo adeegyaddii lagagahorreeyay iyoin inantii shaqaalaha xafiiska ahayd oo saaxiibtinimoka dhaxayso shirkaddii uu tartanku ka dhexeeyay baadhis dheer iyo cadeymo badan ka diboo la ogaaday shaqadiibba waa laga joojiyay, niyad jab baddan ka dib waxay miciin biday Tahriib nasiib xumo se gaadhin ayaa la dhacay.
Waxaan uga socdaa shayga sirtu waa shay muhiimma taas oo ilaalintiisa lagu kala duwan yahayxag dhalasho iyo xag barasho labadaba, muhiimadda aynu qormooyinkan u qoraynaanawaxa weeye in qofkastaa ilaaliyo siraha soo galla mid shaqo, mid shaqsi, mid dawlad, mid bulsho iyo midkasta oo sabab u noqon karta dambi iyo isku dir bulsho, dawlado iyo ciddii ay quseysaba.
Kaliya dhagayso, kaydi unna adeegso qaabka loogutallo gallay iyo cidda loogu tallo gallay se innaga soomaali ahaan haddii waddankaba la iibsannayo sirtiisa si fudud ayaa loo helayaa iyadoo laga hellayo xattaa maamulka ugu sarreeya si aad wax badan u fahantid muhiimadda ay leedahay Sirtu waxaad wax badan ka fahmaysaa Akhriska Buugga Amiin Al Mufti.
Shaqaale badan oo aan arkay waxa shaqadda lagaga joojiyay siroxafiis oo ay bixiyeen,haddii aad shaqaale shirkadeed, dawladeedaad tahay markasta ilaali sirtoodda iyo hadafyadooda shaqo ee ay sammaystaan taasi waxay abuuraysaa in lagu dalacsiiyo oo wax badan lagaala tashado.
Dadka inta badan siraha sheegaa waxa ay noqdaan kuwo aan ciddina la tashan, ciddina waxba waydiin waayo waxa suuqa ugu jira hebel/heblaayo waxba ha iskaga sheegin taasina shaqsiyaniyo bulsho ahaanba waa kugu nusqaam.